Shina · Jolay, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Jolay, 2013
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Jolay, 2013
Mampiseho Ny Disadisa Misy Eo Amin'Ireo Tanora Sy Ny Ray aman-dreny Ao Shina Ilay Horonantsary ‘Tiny Times’ Novokarin'ny Blockbuster
Hevitra 28 Jolay 2013
Kianin'ireo olon-dehibe ao Shina ilay 'Rendrarendran'ny' Tiny Times, tantaranà tovovavy efatra miaina anaty harena izay mikatsaka fatratra ny fitiavana sy ny fahombiazana.
Manome Famatsiam-bola Ho An'ny Hetsi-panentanana Hikarohana Ny ‘Nofinofy Shinoa’ i Shina
Mediam-bahoaka 23 Jolay 2013
Nahazo famatsiana akademika ho an'ny fikarohana ny "Nofinofy Shinoa", fampielezan-kevitr'i Shina nalaina avy amin'ny nofinofy Amerikana, izay manindry ny Antoko Kaomionista ho ilay làlana tokana mankany amin'ny fiandrianana.
Fahalalahàna miteny 21 Jolay 2013
Fanoherana 21 Jolay 2013
Hong Kong (Shina) 21 Jolay 2013
Lalàna 21 Jolay 2013
Manamafy Ny Fifandraisany Amin'i Shina Ny Fitsidihana Ataon'ny Filoha Nizeriana
Nizeria 21 Jolay 2013
Misy milaza fa noho ny tsy nitsidihan'ny filoha Obama ny tany Nizeria no nitsidihan'ny filohan'i Nizeria ny tany Shina nandritra ny herinandro maninjitra. Nandà izany kosa ny tao amin'ny seraserany tamin'ny filazana fa efa herintaona no nanomanana ity fitsidihana ofisialy ity;
Fanoherana 13 Jolay 2013
Fahalalahàna miteny 07 Jolay 2013
Fang Binxing, manampahaizana manokana amin'ny fiarovana ny torohay, nomena solon'anarana hoe “rain'ny Great Firewall - Rindrimbe Aro Afo Goavan'i Shina”, dia niala tamin'ny toeran'ny filohan'ny Anjerimanontolon'i Beijing misahana ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra. Nampitraotra ny tao anaty aterineto ary nahatezitra ny vondrom-piarahamonin'ny manampahaizana mikasika ny Aterineto ny fanapahan-keviny tampoka ny hiala--nataony nandritra ny kabariny fanokafana taom-pianarana teny amin'ny anjerimanontolo.